Happy Death Day 2017 – Myanmar Subtitles
Genre: Horror, Mystery, Thriller Director: Christopher Landon Actors: Charles Aitken, Israel Broussard, Jessica Rothe, Ruby Modine Country: USA Released: 13 Oct 2017 Score: 6.5 Duration: 96 min Quality: Bluray 720p Years: 2017 View: 793
သနေေ့ မင်ျဂလာပါ ……… ။
လူတိုငျးဟာ ကိုယျမှေးနေ့ ဒါမှမဟုတျ တစုံတခု ကွညျနူးစရာ အကွောငျးတခုဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ နမြေို့းကိုဘဲ
ဘယျသူကမြား ကိုယျရကျရကျစကျစကျ အသတျခံလိုကျရတဲ့နကေို့ အကွိမျကွိမျခံစားခငျြပါ့မလဲ ?
Tree ဆိုတဲ့ ကောလိပျကြောငျးသူ ခြာတိတျမလေးတဈယောကျဟာ တကယျ့ အရှုပျအထုပျမလေးတဈယောကျပါဘဲ။
ဘယျသူ့ကိုမှ တနျဖိုးမထား ဘယျသူ့ကိုမှလညျး အရေးမလုပျတဲ့ IDGAF မြိုးလေးပါ။
တဈမနကျမှာတော့ Tree တဈယောကျ မူးပွီးတော့ အိပျယာကနိုးလာခဲ့တယျ။ ညက ကိစ်စတှေ ဘာမှမမှတျမိတော့ဘဲ Carter ဆိုတဲ့ ကောငျလေးရဲ့ အိပျယာပျေါမှာ နိုးလာခဲ့တယျ။ အဲ့ဒိနကေ့ မှတျမှတျရရ
စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျနေ့ …… သူ့မှေးနပေ့ါ။
Tree တဈယောကျ သူ့မှတျညဏျထဲက နတေ့ဈနကေ့ထုတျခှငျ့ရမယျဆို အဲ့ဒိနဟေ့ာ သူမရဲ့မှေးနဘေဲ့ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုနဲ့ ပုံမှနျအတိုငျး သူ့ရဲ့နတှေ့ကေိုကုနျဆုံးခဲ့တယျ။
အိမျထောငျရှိတဲ့ သူ့ ပရောဖကျဆာနဲ့ ခဈြရညျလူးတယျ။
ဒီလိုနဲ့ပါတီသှားတဲ့ လမျးမှာ ………
မကျြနှာဖုံးဝတျထားတဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ တိုကျခိုကျတာကိုကွုံရပွီး Tree တဈယောကျ သသှေားခဲ့တယျ။ သူသပွေီးပွီဆိုတာနဲ့ သူဟာ နာကငျြမှုမရှိဘဲ မနကျကလို Carter ရဲ့ အခနျးထဲမှာ ပွနျနှိုးရလာတယျ။ ဒီကိစ်စကို သူကလှဲပွီး ဘယျသူမှမသိဘူး။ သူ့အနာကငျြဆုံးနရေ့ကျမှာ အသတျခံရတဲ့အပွငျ အသတျခံရတဲ့နရေ့ကျကိုပါ အကွိမျကွိမျ ခံစားနခေဲ့ရတယျ။
အဲ့တာကတော့ သူ့ကို သတျတဲ့သူကို သူမသိမခငျြးပါဘဲ။
Tree တဈယောကျ အကွိမျကွိမျအခါခါဖွဈပျေါနတောကို ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲ ? ဘယျလိုဖွတျကြျောမလဲ ? ဘာတှလေုပျမလဲ ? သူ့ကို သတျသှားတာကရော ဘယျသူလဲ ? အစရှိတဲ့ မေးခှနျးတှကေိုတော့ ရုပျရှငျထဲမှာဘဲကွညျ့ပါလေ။
ဒီဇာတျကားဟာ သူ့ Mystery Genre ကွောငျ့ အားပေးသူ အတျောလေးလြော့သှားတယျဆိုရမယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဒီစာရငျးထဲပါတဲ့ ဇာတျကားတှဟော ဘယျ Voting မှာဆို အတျောအသငျ့ရှိရပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့
Rating ကောငျးမှ ရုပျရှငျကောငျးတယျဆိုတဲ့
ဒီ Stereotype ကွီး မမှနျဘူးဆိုတာ သကျသပွေဖို့အတှကျ Rating သိပျမကောငျးပမေယျ့ အရသာရှိတဲ့ ရုပျရှငျအဆနျးလေးတှကေိုပါ ထညျ့ပေးပါတော့တယျ။
ဒီရုပျရှငျရဲ့ အကွိုကျဆုံးတဈခကျြပွောရမယျဆို ရုပျရှငျဟာ Tree ရဲ့ တဈရကျတညျးကိုဘဲ
တဈနကေို့ တဈနညျးနဲ့ ဘာပွီး
ဘာဖွဈလာမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးနိုငျသညျ့တိုငျ မှားမွဲမှားနအေုနျးမှာပါဘဲ။
နောကျတဈခုက Tree ဆိုတဲ့ ကာရိုကျတာ ……
အစပိုငျးမှာ သူ့ကို လုံးဝ Bitchy Type အနနေဲ့ ပုံဖျောထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဖွေးဖွေးနဲ့ ပရိသတျက ရုပျရှငျကွညျ့လာရငျးနဲ့ Tree ကိုနားလညျလာမယျ။ သူခံစားနရေတဲ့ Time loop ကွီးကနေ ဝိုငျးကူ ရုနျးထှကျပေးခငျြစိတျတှပေျေါလာမယျ။ တဖွေးဖွေးနဲ့ Tree ကို ခဈြလာပါလိမျ့မယျ။ Tree ဟာ မိနျးကလေးတဈယောကျမို့ ယောကျြားလေးတဈယောကျအနနေဲ့ ခဈြနတောမြိုးမဟုတျဘဲ သူခံစားနရေတာတှကေို သူ့နရောကနေ ဝငျခံစားမိရငျးက နားလညျပွီး သနားရငျးနဲ့ခဈြလာတာမြိုးပေါ့။
တဈနညျးပွောရရငျတော့ ရုပျရှငျဖနျတီးသူတှရေဲ့ Character Building ရော ကာရိုကျတာမိတျဆကျပုံရောဟာ အတျောကွီးအထာကပြါတယျ။
ရုပျရှငျရဲ့ အဓိကသော့ခကျြဖွဈတဲ့ Tree ကို ဘယျသူသတျသှားတာလဲ ဆိုတဲ့အဖွဟော Tree မသိသရှေ့ ပရိသတျလညျးမသိရပွနျပါဘူး။ ဒီတော့ ဘယျသူဖွဈမလဲလို့ Viewer က စဉျးစားလိုကျ တကယျဖွဈမလာလိုကျ Tree ကတဈယောကျကို စဉျးစားလိုကျ Viewer ကရော ဟုတျနိုငျရဲ့လားစဉျးစားကွညျ့လိုကျနဲ့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ အဆငျပွနေပေါလိမျ့မယျ။
Review Crd – #SilverScreen
Download Type – Openload, Gofile, Filerocks, Archive
Download Size – 801MB (720p Bluray)
သေနေ့ မင်္ဂလာပါ ……… ။
လူတိုင်းဟာ ကိုယ်မွေးနေ့ ဒါမှမဟုတ် တစုံတခု ကြည်နူးစရာ အကြောင်းတခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ နေ့မျိုးကိုဘဲ
ဘယ်သူကများ ကိုယ်ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့နေ့ကို အကြိမ်ကြိမ်ခံစားချင်ပါ့မလဲ ?
Tree ဆိုတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူ ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်ဟာ တကယ့် အရှုပ်အထုပ်မလေးတစ်ယောက်ပါဘဲ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ တန်ဖိုးမထား ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အရေးမလုပ်တဲ့ IDGAF မျိုးလေးပါ။
တစ်မနက်မှာတော့ Tree တစ်ယောက် မူးပြီးတော့ အိပ်ယာကနိုးလာခဲ့တယ်။ ညက ကိစ္စတွေ ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘဲ Carter ဆိုတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ နိုးလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒိနေ့က မှတ်မှတ်ရရ
စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ …… သူ့မွေးနေ့ပါ။
Tree တစ်ယောက် သူ့မှတ်ညဏ်ထဲက နေ့တစ်နေ့ကထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆို အဲ့ဒိနေ့ဟာ သူမရဲ့မွေးနေ့ဘဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း သူ့ရဲ့နေ့တွေကိုကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။
အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ သူ့ ပရောဖက်ဆာနဲ့ ချစ်ရည်လူးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပါတီသွားတဲ့ လမ်းမှာ ………
မျက်နှာဖုံးဝတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်ခိုက်တာကိုကြုံရပြီး Tree တစ်ယောက် သေသွားခဲ့တယ်။ သူသေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ သူဟာ နာကျင်မှုမရှိဘဲ မနက်ကလို Carter ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ပြန်နှိုးရလာတယ်။ ဒီကိစ္စကို သူကလွဲပြီး ဘယ်သူမှမသိဘူး။ သူ့အနာကျင်ဆုံးနေ့ရက်မှာ အသတ်ခံရတဲ့အပြင် အသတ်ခံရတဲ့နေ့ရက်ကိုပါ အကြိမ်ကြိမ် ခံစားနေခဲ့ရတယ်။
အဲ့တာကတော့ သူ့ကို သတ်တဲ့သူကို သူမသိမချင်းပါဘဲ။
Tree တစ်ယောက် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါဖြစ်ပေါ်နေတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ? ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲ ? ဘာတွေလုပ်မလဲ ? သူ့ကို သတ်သွားတာကရော ဘယ်သူလဲ ? အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာဘဲကြည့်ပါလေ။
ဒီဇာတ်ကားဟာ သူ့ Mystery Genre ကြောင့် အားပေးသူ အတော်လေးလျော့သွားတယ်ဆိုရမယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီစာရင်းထဲပါတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဟာ ဘယ် Voting မှာဆို အတော်အသင့်ရှိရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်
Rating ကောင်းမှ ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့
ဒီ Stereotype ကြီး မမှန်ဘူးဆိုတာ သက်သေပြဖို့အတွက် Rating သိပ်မကောင်းပေမယ့် အရသာရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်အဆန်းလေးတွေကိုပါ ထည့်ပေးပါတော့တယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောရမယ်ဆို ရုပ်ရှင်ဟာ Tree ရဲ့ တစ်ရက်တည်းကိုဘဲ
တစ်နေ့ကို တစ်နည်းနဲ့ ဘာပြီး
ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်သည့်တိုင် မှားမြဲမှားနေအုန်းမှာပါဘဲ။
နောက်တစ်ခုက Tree ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာ ……
အစပိုင်းမှာ သူ့ကို လုံးဝ Bitchy Type အနေနဲ့ ပုံဖော်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖြေးဖြေးနဲ့ ပရိသတ်က ရုပ်ရှင်ကြည့်လာရင်းနဲ့ Tree ကိုနားလည်လာမယ်။ သူခံစားနေရတဲ့ Time loop ကြီးကနေ ဝိုင်းကူ ရုန်းထွက်ပေးချင်စိတ်တွေပေါ်လာမယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ Tree ကို ချစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Tree ဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မို့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ချစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူခံစားနေရတာတွေကို သူ့နေရာကနေ ဝင်ခံစားမိရင်းက နားလည်ပြီး သနားရင်းနဲ့ချစ်လာတာမျိုးပေါ့။
တစ်နည်းပြောရရင်တော့ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေရဲ့ Character Building ရော ကာရိုက်တာမိတ်ဆက်ပုံရောဟာ အတော်ကြီးအထာကျပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်တဲ့ Tree ကို ဘယ်သူသတ်သွားတာလဲ ဆိုတဲ့အဖြေဟာ Tree မသိသရွေ့ ပရိသတ်လည်းမသိရပြန်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်သူဖြစ်မလဲလို့ Viewer က စဉ်းစားလိုက် တကယ်ဖြစ်မလာလိုက် Tree ကတစ်ယောက်ကို စဉ်းစားလိုက် Viewer ကရော ဟုတ်နိုင်ရဲ့လားစဉ်းစားကြည့်လိုက်နဲ့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ အဆင်ပြေနေပါလိမ့်မယ်။
(801MB) Download Gofile Myanmar 720p
(801MB) Download Filerocks Myanmar 720p
(801MB) Download Archive Myanmar 720p
#Happy Death Day 2017 #Download Happy Death Day 2017 Full Movie #Free Happy Death Day 2017 Download